I-Industrial Burner Igniter Rods China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Spark Plug Insulator > Ignitor Insulator of Household Electrical Appliances > I-Industrial Burner Igniter Rods
I- electrode ye-ignition ye- spark iyasetshenziselwa kakhulu ukuhlukahluka komshini wokushisa, ubheyili, ngamaphuzu anamandla afana nokushisa okubucayi, ukuqina okuqinile, ukumelana nokuguga okuqinile, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokushisa, ukuqina kwamandla okushisa, amandla aphezulu e-dielectric. Intambo ye-interface ejwayelekile i-M14 × 1.25, i-M16 × 1.5, i-M18 × 1.5, i-G1 / 2. Inaliti ye-electrode ye-Lightning yi-Φ2.6 Φ3Φ 5 no-Φ 3.5. Ubude obude bele-electrode bungakhiwa ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende, izingxenye ze-ceramic ze-electrode inaliti ingahlanganiswa ngokuvumelana nezidingo ezahlukene zamakhasimende.
Ukuguga nokushisa okuphezulu, ukumiswa okuphelele, amandla aphezulu, ukuzinza okuhle, okufanelekele imvelo ehlukene.
Ipharamitha yobuchwepheshe : 0.5 kuya ku-1.5mm ububanzi, ubude buka-50-80mm, amandla okuqhaqhazela> 15KV / mm.
Zonke izinhlobo zegayipi yegesi, igesi elineziqu ze-petroleum, igesi yemvelo kanye nokushisa kwamanzi kagesi, isitofu, i-ect ye-oven enezinhloso ezifanayo.